राष्ट्र बैंक Archives ~ Page3of 32 ~ Banking Khabar
थोरै पैसा जम्मा गर्दा परिचयपत्र नचाहिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा
अरुको बैंक खातामा रकम जम्म गर्दा परिचयपत्र चाहिने सिस्टमलाई संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअनुसार, अब कुनै पनि बैंकमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम जम्मा गर्दा परिचयपत्र नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले …
२५ करोडको ट्रेजरी बिल सोमबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार २५ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल निष्काशन गर्ने भएको छ । ९१ दिने अवधिका लागि विक्री गर्न लागिएको उक्त ट्रेजरी बिलको बोलकबोल सोमबार अपरान्ह ३ बजे हुनेछ । मंगलबार निष्काशन गरिने ट्रेजरी बिल मंसिर ५ गते …
राष्ट्र बैंकको नयाँ एकिकृत निर्देशीका, के के छन् विशेषता ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७४ जारी गरेको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सर्कुलर मार्फत गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु परिमार्जन सहित समेटेर एकीकृत निदेशिका जारी गरिएको हो । यो निर्देशिका जारी भएसँगै अब मौद्रिक नीतिमा भएका नयाँ व्यवस्था …
राष्ट्र बैंकले अब लघुवित्तलाई लाइसेन्स नदिने
अब नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नदिने भएको छ । यसअघि १० जिल्लामा लाइसेन्सिङ खुला रहेकोमा अब ती जिल्लाहरुमा पनि लघुवित्त संचालनमा ल्याउने नपाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच नपुगेका मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, …
राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारका लागि उठाउने आन्तरिक ऋणको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तालिकाअनुसार, सरकारले चालु बर्षका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । जसमध्ये, ट्रेजरी बिल्समार्फत ६६ अर्ब रुपैयाँ, …
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पछ्याउँदै राष्ट्र बैंक
सुष्मा थापा । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन विभिन्न कदमहरु चालिरहेको छ । गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालको कार्यकाल सुरु भएदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन आएका छन् । चुक्तापुँजी वृद्धि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, बैंकिङ …
आउने सोमबार पुनः २५ करोडको ट्रेजरी बिल
आगामी सोमबार अर्थात साउन १६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ करोड एक लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने भएको छ । इच्छुक खरिकर्तालाई सोमबार दिउसो ३ बजेभित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरिएको छ । बोलपत्र अनलाइनमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ । …
एकलाख भन्दा कम रकम जम्मा गर्दा परिचयपत्र नचाहिने
अरुको खातामा पैसा जम्मा गर्दा अनिवार्य गरिएको परिचय पत्रलाई केही खुकुलो बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शमा राष्ट्र बेंकले एकलाख माथिको रकम जम्मा गर्दा परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागेको हो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक लाख रुपैयाँभन्दा …
साँढे पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल सोमबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले साँढे पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल खरिद गर्न इच्छुकलाई भोली (सोमबार) दिउसो ३ बजेभित्रमा बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ । बोलपत्र अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र …
१० लाख माथिको कारोबार चेकमार्फत अनिवार्य
अबदेखि एकैपटकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्नुपरेमा अनिवार्य रुपमा बैंकको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । जसअनुसार, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वा …